iWatermark + IOS को लागि 4K भिडियोहरूको वाटरमार्किंग थप्दछ | बेर आश्चर्यजनक
तत्काल रिलीज लागि:
सैन फ्रांसिस्को, CA - iWatermark, नम्बर १ र मात्र सबै plat प्लेटफर्महरू, आईफोन / आईप्याड, विन्डोज, एन्ड्रोइड र म्याकका लागि पानी मार्किंग उपकरण उपलब्ध छ। iWatermark + सबै लोकप्रिय प्लेटफर्महरूको लागि सबै भन्दा लोकप्रिय र शक्तिशाली व्यावसायिक पानी मार्किंग उपकरण हो।
"धेरै बर्षसम्म म iWatermark मा निर्भर छु मलाई सजिलै मेरो आईफोन वा आईप्याड मा मेरो छविहरु मा मेरो लोगो राख्न को लागी अनुमति दिन। जे होस्, भर्खरै रिलीज गरिएको iWatermark + ले यस प्रक्रियालाई पूरै नयाँ तहमा पुर्‍याउँछ। "
फोटोग्राफर टेरी व्हाइट
एडोब वर्ल्डवाइड क्रिएटिव क्लाउड डिजाइन ईभान्जलिस्ट र सर्वश्रेष्ठ बेच्ने लेखक।
जानकारीको लागि वा नि: शुल्क संस्करण डाउनलोड गर्न यहाँ ट्याप गर्नुहोस्।
प्लम एमेजिंगका सीईओ जूलियन मिलरले भने, “यदि तपाईंले ईमेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, आदि मार्फत लिनुभएको अचम्मको फोटो वा भिडियो साझा गर्नुभयो भने यो भाइरल हुने सम्भावना धेरै छ भने विश्वव्यापी रूपमा तपाईंको नियन्त्रणबाट बाहिर उडेर तपाईंलाई कुनै सम्पर्क बिना नै। निर्माताको रूपमा। " उनले पज गरे, त्यसपछि थपिए, "साधारण समाधान भनेको तस्विरहरू / भिडियोहरू iWatermark + प्रयोग गरेर दृश्यात्मक र / वा अदृश्य वाटरमार्कको साथ हस्ताक्षर गर्नु हो भने तपाईंको बौद्धिक सम्पत्तीमा तपाईंको लागि एक जडान हुन्छ जहाँ ती iWatermarked फोटोहरू / भिडियोहरू हिड्न सक्छन्।"
जानकारीको लागि वा सशुल्क संस्करण डाउनलोड गर्न यहाँ ट्याप गर्नुहोस्।
यो संस्करण नि: शुल्क नभएको खण्डमा तपाई प्रमाणित प्रेस गर्नुहोस् कृपया प्रमाणपत्रहरू सहित जवाफ दिनुहोस् र हामी एप्पल प्रोमो कोडको साथ प्रतिक्रिया दिनेछौं।
जुलियन मिलरले जारी राखी "यो नयाँ संस्करणको साथ iWatermark + वाटरमार्क 4K भिडियोहरू र मिडिया, फोटो र भिडियोहरू आयात गर्न सक्छ, जस्तै क्लाउड सेवाहरू जस्तै आईक्लाउड, ड्रपबक्स, गुगल ड्राईभ, बक्स, एडोब क्रिएटिभ क्लाउड र अन्य। iWatermark + आईओएस को लागी एक मात्र पेशेवर वाटरमार्क अनुप्रयोग हुन जारी छ। अझ धेरै सुविधाहरू चाँडै आउँदैछन्। ”
सजिलैसँग सुरक्षित गर्नुहोस् र तपाईंको फोटोहरूलाई टेक्स्ट, ग्राफिक, टेक्स्ट अन आर्क, क्यूआर कोड, हस्ताक्षर, सीमा, भेक्टर, रिसाइज, कस्टम फिल्टर, मेटाडाटा र स्टेगनोग्राफिक वाटरमार्कको साथ सुरक्षा गर्नुहोस्। एक पटक तस्विरमा थपिए पछि यी दृश्य र / वा अदृश्य वाटरमार्कले फोटो वा भिडियो सिर्जना गरिएको, सम्पादन गरिएको र तपाईंको स्वामित्वमा रहेको देखाउँदछ। यी अद्वितीय सुविधाहरूले iWatermark + पेशेवर र शुरुआतीहरूको लागि आवश्यक गर्दछ।
वाटरमार्क प्रकारहरू (माथि) iWatermark + मा फेला पारियो कुनै अन्य सफ्टवेयरमा फेला परेन।
दृश्य र / वा अदृश्य वाटरमार्कहरू थप्न क्षमता आईवटरमार्क + लाई अद्वितीय छ।
वाटरमार्कको लागि फोटो सम्पादन एक्स्टेन्सनको रूपमा अन्य अनुप्रयोगहरूमा आई-वाटरमार्क + प्रयोग गर्न पनि अनौंठो छ।
सबै क्लाउड सेवाहरू जस्तै ड्रपबक्स, आईक्लाउड, बक्स, गुगल ड्राईव, वनड्राइभ, एडोब क्रिएटिभ क्लाउड, आदि आयात गर्न अनौंठो छ।
विभिन्न आकार र अभिविन्यासको फोटोको ब्याच वाटरमार्किंगका लागि सापेक्ष र निरपेक्ष स्केलि।। अद्वितीय!
फोटोमा मेटाडाटा प्रदर्शन गर्न टेक्स्ट वाटरमार्कमा ट्यागको रूपमा EXIF, IPTC, GPS र अन्य मेटाडाटा प्रयोग गर्नुहोस्। यो अझै अर्को अनौंठो सुविधा हो।
केहि वाटरमार्क प्रकारहरू दृश्यमान छन् र अरूहरू अदृश्य छन्। दुबै बिभिन्न उद्देश्यहरूको सेवा गर्छन्। एक दृश्य वाटरमार्क त्यो हो जहाँ तपाईं तपाईंको लोगोमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ वा तपाईंको छविमा हस्ताक्षर। अदृश्य वाटरमार्कहरू यति स्पष्ट छैनन् र फाईल वा छवि रंग डेटामा गाडिइएको जानकारी हुन्।
तपाईंको कस्टम वाटरमार्कहरू उपलब्ध छन् र कुनै पनि फोटो वा भिडियोमा ट्यापको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को अद्वितीय र आवश्यक सुविधा।
दृश्यमान वाटरमार्क टेक्स्ट- फन्ट, आकार, रंग, रोटेशन, आदि परिवर्तन गर्न सेटिंग्सको साथ मेटाडेटा सहित कुनै पाठ।
पाठ चाप - एक वक्र पथमा पाठ।
बिटमैप ग्राफिक- एक ग्राफिक प्रायः पारदर्शी .png फाईल हो तपाईको लोगो, ब्राण्ड, प्रतिलिपि अधिकार प्रतीक, इत्यादि आयात गर्नका लागि।
बोर्डर - फोटोहरूमा विशेष बोर्डरहरू राख्नुहोस्।
भेक्टर ग्राफिक- कुनै पनि आकारमा उत्तम ग्राफिक्स प्रदर्शन गर्न over००० भन्दा बढी बिल्ट-इन भेक्टर (SVG's) प्रयोग गर्नुहोस्।
रिसाइज - - कुनै पनि तस्बिर (हरू) मा वाटरमार्कको रूपमा अनुकूलन पुनःआकार थप्न ट्याप गर्नुहोस्।
कस्टम फिल्टर - - कुनै फोटो (हरू) मा वाटरमार्कको रूपमा कस्टम फिल्टर थप्न ट्याप गर्नुहोस्।
QR कोड - एक प्रकारको बारकोड जस्तै जानकारीको साथ ईमेल वा यूआरएल कोडिंगमा।
हस्ताक्षर - हस्ताक्षर गर्नुहोस्, आयात वा तपाईंको हस्ताक्षर वाटरमार्कमा तपाईंको सिर्जनाहरू हस्ताक्षर गर्नका लागि। अन्वेषणयोग्य वाटरमार्कमेटाडाटा - सूचना फाईलको आईपीटीसी वा एक्सएमपी भागमा (तपाईंको ईमेल वा यूआरएल जस्तै) थप्दै।
StegoMark - StegoMark तस्वीर को डाटा मा नै तपाइँको ईमेल वा url जस्तै जानकारी इम्बेड गर्न को लागी हाम्रो स्वामित्वात्मक स्टेगोनोग्राफिक विधि हो। यो उपलब्ध हुन वा पासवर्डको साथ लुकाउन सकिन्छ।
iWatermark फोटोग्राफर र भिडियो को लागी एक विशेष पेशेवर उपकरण हो। कम महँगो, अधिक कुशल, छिटो र सरल तर फोटोशप प्रयोग गर्न। iWatermark फोटोग्राफरहरु द्वारा फोटोग्राफर द्वारा पानी मार्किंग को लागी डिजाईन गरीएको छ। यो खास गरी सामाजिक मिडिया जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, आदि गर्दै सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
* वाटरमार्क फोटो र भिडियो पनि।
* क्यामेरा एल्बम, आईक्लाउड, ड्रपबक्स, गुगल ड्राईभ, बक्स र अन्य क्लाउड सेवाहरूबाट फोटो वा भिडियोहरू आयात गर्नुहोस्।
* फोटो (हरू) वा भिडियो (हरू) मा बहु वाटरमार्कको अनुप्रयोग।
* ब्याच मोडमा वाटरमार्क एक वा धेरै फोटोहरू।
* सिर्जना गर्न, अभिलेख गर्ने र १२ प्रकारका वाटरमार्कहरू प्रयोग गर्ने क्षमता, कुनै पनि अन्य वाटरमार्किंग अनुप्रयोगको तुलनामा धेरै। ११ कुल कुल वाटरमार्क प्रकारहरू = visible देखिने + २ अदृश्य तल सूचीबद्ध छन्।
दृश्यमान वाटरमार्क प्रकार ())
- पाठ वाटरमार्क - र फन्ट, रंग, कोण, अस्पष्टता, आदि परिवर्तन गर्नुहोस्।
- आर्क पाठ वाटरमार्क - र फन्ट, रंग, कोण, अस्पष्टता, आदि परिवर्तन गर्नुहोस्।
- बिटम्याप / लोगो वाटरमार्क - तपाईंको लोगो आयात गर्नुहोस् वा समावेश लाइब्रेरीबाट कला प्रयोग गर्नुहोस्।
- भेक्टर वाटरमार्क - भेक्टर वाटरमार्कमा निर्मित प्रयोग गर्नुहोस्।
- सीमा वाटरमार्क - तस्विरको वरिपरि विशेष बोर्डर राख्नुहोस्।
- हस्ताक्षर वाटरमार्क - स्क्यान गर्दछ, सिर्जना गर्दछ र तपाईंको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर वाटरमार्क लागू गर्दछ।
- QRCode वाटरमार्क - एक वाटरमार्क बनाउँदछ जुन कुनै बारकोड जस्तै हुन्छ, कुनै स्मार्टफोन क्यामेराद्वारा पठनीय र जानकारीको 4000००० क्यारेक्टरहरू सम्म समावेश गर्न सक्दछ, जस्तै नाम, ईमेल र युआरएल।
- वाटरमार्क रिसाइज गर्नुहोस् - कुनै फोटोमा वाटरमार्कको रूपमा कस्टम रिसाइज थप्न ट्याप गर्नुहोस्।
- अनुकूलन फिल्टर - कुनै फोटोमा वाटरमार्कको रूपमा कस्टम फिल्टर थप्न ट्याप गर्नुहोस्।
अदृश्य वाटरमार्क प्रकार (२)
- मेटाडाटा वाटरमार्क - आईपीटीसी / एक्सआईएफ ट्यागहरू (जस्तै क्यामेरा जानकारी, जीपीएस, प्रतिलिपि अधिकार, इत्यादि) समावेश गरेको वाटरमार्कहरू बनाउनको लागि
- स्टेगानोग्राफिक वाटरमार्क - नाम, ईमेल र / वा वेबसाइट लिंकको रूपमा फोटोको रंग डेटामा इम्बेड गर्न / इन्साइप्टिंग जानकारीको लागि। * स्ट्यान्डअलोन वा लाइटरूम, फोटोशप, एप्पल फोटो, गुगल फोटो र अन्य फोटो आयोजकहरूको साथ संयोजनको रूपमा काम गर्दछ।
* ब्याच वा अनुक्रमिक प्रक्रिया।
* महत्वपूर्ण: वाटरमार्कको सापेक्ष वा निरपेक्ष स्केलिंग। जब ब्याच बिभिन्न रिजोलुसन र अभिमुखिकरण फोटोहरू प्रक्रिया गर्दछ।
* वाटरमार्कको पुस्तकालय डिजाईन, सम्पादन र प्रबन्ध गर्नुहोस्।
* ट्यागहरू मेटाडाटा हुन् (GPS, Exif, XMP, संख्या, मिति / समय) जुन पाठ वाटरमार्कमा थप्न सकिन्छ।
* सजिलै पूर्वावलोकन गर्नुहोस्
* इनपुट / आउटपुट बाट / सबै प्रमुख फाईल प्रकारहरू JPEG, TIFF, PNG, RAW, आदि।
* पाठ, ग्राफिक, वा QR वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
* अस्पष्टता, फन्ट, रंग, बोर्डर, स्केल, रोटेशन, छाया, विशेष प्रभावहरू, आदि समायोजित गर्नुहोस्।
* तपाईंको पाठ वाटरमार्कको लागि २ for २ उत्कृष्ट फन्टहरू।
* खोपेर एम्बोस पाठ।
* हस्ताक्षर स्क्यानर तुरून्त तपाईंको हस्ताक्षर वा वाटरमार्कको रूपमा अन्य ग्राफिक आयात गर्न।
* लाइभ पूर्वावलोकन र फन्ट, रंग, स्केल, अस्पष्टता, आकार, स्थिति र कोण को सम्पादन।
* मेटाडाटा हेर्नुहोस् र फोटोहरूमा exif।
* छिटो /२//32 बिट बहु-थ्रेडेड अनुप्रयोग जुन CPU / GPU को प्रयोग गर्न सक्दछ।
* केवल iWatermark + सँग एक स्टेगनोग्राफिक वाटरमार्क छ कि फोटोमा अदृश्य रूपमा ईम्बेड / गुप्तिकरण जानकारी। * महान पुस्तिका र समर्थन।
* सजिलैसँग फेसबुक, फ्लिकर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र अधिकमा साझेदारी गर्नुहोस्।
* वाटरमार्क प्रबन्धक जसले सयौं वाटरमार्क ट्र्याक गर्न सक्छ। प्रबन्धकले लक गर्न / अनलक गर्न, पुन: नामाकरण गर्न, मेटाउने, वाटरमार्कको पूर्वावलोकन पनि अनुमति दिन्छ।
* लगातार अपडेट र सुधारिएको।
* अझै धेरै…।
शताब्दीयौं अघि वाटरमार्कहरू कागज बनाउने प्रक्रियाको क्रममा परिचय चिन्हको रूपमा शुरू भयो। कागज निर्माणको क्रममा भिजा कागजमा छाप लगाईन्थ्यो छाप / प्रतीकको साथ। चिनो लगाइएको क्षेत्र वरपरको कागज भन्दा पातलो रह्यो, त्यसैले नाम वाटरमार्क। त्यो कागज, जब सुख्खा र प्रकाश सम्म पकड, वाटरमार्क देखायो। पछि यो प्रक्रिया आधिकारिक कागजातहरूको प्रामाणिकता, पैसा र सामान्यतया जालसाजी रोक्न प्रयोग गरियो।
डिजिटल वाटरमार्किंग वाटरमार्किंगको अन्तिम रूप हो। कागजमा भौतिक वाटरमार्कहरू जस्तै, डिजिटल वाटरमार्कहरू मालिक / सिर्जनाकर्तालाई पहिचान गर्न र छविहरू, अडियो र भिडियो जस्ता डिजिटल मिडिया प्रमाणीकरण गर्न फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक iWatermark subtly प्रदर्शित प्रदर्शित गर्दै, तपाईंको फोटो वा भिडियो जान्छ जहाँ पर्दैन, यो तपाईंको स्वामित्वमा छ।
नाम, ईमेल वा यूआरएलको साथ सँधै, iWatermark ताकि तपाईंको सिर्जनाहरू तपाईंसँग केहि कानूनी सम्बन्ध छ।
तपाइँको कम्पनी, नाम र वेबसाइट iWatermarking सबै फोटोहरू / भिडियोहरू द्वारा तपाइँ रिलीज गरेर पदोन्नति र सुरक्षा गर्नुहोस्।
डिजिटली तपाईंको काम / फोटो / ग्राफिक / आर्टवर्क आईवाटरमार्कको साथ हस्ताक्षर गर्नुहोस्, तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती पुनः दावी गर्नुहोस् र तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भनि मान्यता कायम गर्नुहोस्।
सजिलैसँग, सुरक्षित गर्नुहोस् र दृश्यहरू र अदृश्य iWatermark को साथ तपाईंको फोटोहरू सुरक्षा गर्नुहोस् जुन तिनीहरू सिर्जना गरियो र तपाईंको स्वामित्वमा छन्।
संस्करण 4.5 संस्करण परिवर्तनहरू
- iWatermark 4K भिडियोहरू, 1080, 720 आदि।
- क्लाउड सेवाहरू जस्तै आईक्लाउड, ड्रपबक्स, गुगल ड्राईव, बक्स, इत्यादिबाट एकल वा बहु तस्वीरहरू वा भिडियोहरू आयात गर्नुहोस्।
- मेमोरीको राम्रो प्रयोग। यो महत्वपूर्ण छ किनकि फोन अनुप्रयोगहरू डेस्कटप अनुप्रयोगहरू भन्दा बढी शक्तिशाली हुन सुरू गर्दछ। हो, हामीलाई थाहा छ त्यो पागल हो तर यो भइरहेको छ।
यो अनुप्रयोग एप्पल आईफोन / आईप्याड, क्यानन इंक, निकन इंक, ओलम्पस इंक, सोनी इंक, सामसु,, एसएलआर, नियमित क्यामेराको साथ प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।
प्लम अमेजिंग सफ्टवेयरले आज IWatermark + को IOS को लागि संस्करण announced. 4.5 घोषणा गर्‍यो। iWatermark + जसले K के भिडियोको व्यावसायिक वाटरमार्किंग थपेको छ। iWatermark + सबै4प्लेटफर्महरू, आईफोन / आईप्याड, एन्ड्रोइड, विन्डोज र म्याकका लागि मात्र जलमार्ग उपकरण उपलब्ध छ। iWatermark + व्यवसायिक र व्यक्तिगत उपयोगको लागि पेशेवर फोटोग्राफरहरूको लागि आवश्यक वाटरमार्किंग अनुप्रयोग हो। ब्याच वा अनुक्रमिक प्रक्रिया। सापेक्ष र निरपेक्ष स्केलिंग। सबै नमूनाको डाटाबेस र प्रयोगकर्ता कस्टम वॉटरमार्क एक ट्याप संग उपलब्ध। वाटरमार्क प्रकारहरूमा टेक्स्ट, ग्राफिक, भेक्टर, टेक्स्ट अन आर्क, क्यूआर कोड, बोर्डर सिग्नेचर, रिसाइज, कस्टम फिल्टर, मेटाडाटा र स्टेगनोग्राफिक समावेश छन्।
iWatermark आईफोन / आईप्याड को लागी फ्रि (फोटोहरु मा सानो 'iWatermark + को साथ बनाईएको') लि Link्क डाउनलोड गर्नुहोस्
आईवटरमार्क + आईफोन / आईप्याडको लागि भुक्तान गरिएको (पूर्ण संस्करण, विज्ञापनहरू छैन, कुनै अनुप्रयोगमा खरीद छैन) डाउनलोड लिंक
iWatermark + YouTube ट्यूटोरियलहरू - धेरै छोटो ट्यूटोरियल / अन्तर्दृष्टि को उपयोगी श्रृंखला।
बेर आश्चर्यजनक + म्यानुअल बारे अधिक जानकारी
Sec० सेकेन्ड भिडियो स्वाद -
आईवटरमार्क + अनुप्रयोग आइकन १०२× × १०२।
बेर आश्चर्यजनक वेबसाइट
बेर आश्चर्यजनक स्टोर
प्लम एमेजिंग, Llc एक निजी रूपमा आयोजित कम्पनी हो जुन आईओएस, विन्डोज, एन्ड्रोइड र म्याक अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न समर्पित छ। प्लम अमेजिंग १ 1995 2018 since देखि मोबाइल र डेस्कटप अनुप्रयोगहरूको विश्वव्यापी प्रदायक हो। प्लम अमेजिंग आफ्नै, गुगल र एप्पलको वेबसाइट मार्फत सफ्टवेयर सिर्जना र बिक्री गर्दछ तर अन्य कम्पनीहरू र ग्राहकहरूको लागि विशेष गरी फोटोग्राफीको क्षेत्रमा विकास कार्य (प्रोग्रामिंग) पनि गर्छ। हामीसँग प्रतिलिपिपास्ट, iWatermark, आवश्यक, iCock, TinyAlarm, TinyCal, PixelStick, MountWatcher, SpeechMaker, PhotoShrinkr र अरू जस्तै महान उत्पादनहरू सिर्जना गर्न एक जोश छ। प्रतिलिपि अधिकार (सी) २०१ Pl बेर आश्चर्यजनक। सबै अधिकार सुरक्षित।
फेसबुक प्रोफाइल: हेर्नुहोस्
लिङ्क गरिएको प्रोफाइल: हेर्नुहोस्